Fitaovana fanondrahana rano → Fantsom-panafody tsy misy varingarina
Fitaovana fambolena rano
Mihabetsaka amin'ny orinasa anjara fanompoana, anjara fanompoanaary na dia ao aza trano miseho manokana ny tselatra maimaimpoana. Modern fitaovana ho an'ny rano gassing manome rano fisotro mangatsiaka, mafana sy mafana ary maripana vaovao sy mahafinaritra izy, miankina amin'ny maodelin'ny fitaovana voafantina sy ny filan'ny olona mampiasa azy.
Mpamatsy rano vita amin'ny karbaona Izy io dia tonga lafatra na amin'ny toerana malalaka, amin'ny toeram-piasana mihidy sy ny andrim-panjakana, ary koa amin'ny trano tsy miankina, izany hoe na aiza na aiza ilana rano avo lenta.
Ireo mpamokatra fisotroana rano fisotro misy eny an-tsena dia miezaka ny hahatratra ny kalitao avo indrindra sy ny tsiro amin'ny rano nomanina amin'ny alàlan'ny vahaolana teknolojia vaovao. Mandritra izany fotoana izany, izy ireo koa dia mikarakara ny endrika maoderina ny fitaovana izay hiditra amin'ny efitrano rehetra. Tombony fanampiny ho an'ireo fitaovana aseho eto rano carbonated koa no fiasan'izy ireo avo.
Miankina amin'ny zavatra ilainao dia afaka misafidy fitaovana enti-kilasy ambony izahay hanomanana rano mangirana:
Fanaterana rano tsy misy alika-Class dia namboarina sy natao hampiasaina amin'ny atitany isan-karazany, izay tsy fitaovana miasa fotsiny fa koa mandravaka ny toerana nametrahana azy.
Ny vahaolana teknolojia maoderina indrindra ampiasaina amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ity fitaovana ity ary ny fampiasana ireo fitaovana avo lenta indrindra ho an'ny famokarana azy io dia manome antoka ny fiasan'ny mpizara sy ny fahombiazany farany ambony.
Ny mpamatsy rano Hi-Class dia afaka manomana rano mangatsiaka sy mangatsiaka hatramin'ny 45 litatra isan'ora ary hatramin'ny rano 13 litatra isan'ora.
Manome karazana rano matsiro efatra ilay masinina.
Ny rano efa nomanina dia mety hatsiaka, mafana na maripanan'ny efitrano, azo ampifangaroana karbonika ihany koa.
Ny rano matsiro sy mahasalama nomanin'ny dispenser an'ny Hi-Class dia azo arotsaka mivantana ao anaty sambo misy haavo maro karazana. Azo atao izany noho ny fametrahana spout azo ovaina ao amin'ilay fitaovana.
Ny fitambaran'ny vera fitaratra mainty eo anoloana eo amin'ny fitaovana misy vy tsy misy fangarony sy tontonana fanaraha-maso kanto indrindra dia ahafahanao mamorona endrika maoderina izay mifanaraka amin'ny atitany rehetra, ary miaraka am-piasana miaraka amin'ireo toetra avo lenta ao amin'ilay fitaovana.
Mpanome rano tsy misy varingarina misy Pro-Stream
Mpanome rano tsy misy varingarina misy Pro-Stream mamela anao hanomana rano mangatsiaka, mafana sy karbonika ao anatin'ny fotoana fohy, miavaka amin'ny tsiro tena tsara.
Ny mpizara Pro-Stream dia miavaka amin'ny famolavolana maoderina sy ny fampiasa avo lenta, ary noho ny tsanganana voaravaka thermally sy tontonana fanaraha-maso, dia mora ampiasaina ilay mpaninjara. Ampahafantarina mazava ny mpampiasa momba ny toe-javatra iasan'ny fitaovana noho ireo hafatra naseho.
Ny dispenser Pro-Stream dia afaka miasa miaraka amin'ny rafitra boiler, cooler na gas. Noho ny rafitra mifehy ny fomba fiasan'ny fitaovana dia azo atao ny mampihena ho azy ny fihinanana angovo.
Azo hafanaina hatramin'ny 98 ° C ny rano etoary ny fahombiazan'ny fitaovana dia ahafahanao mameno hatramin'ny kaopy 215 miaraka amin'ny 250 ml isan'ora. Ny tombony an'ity dispenser ity dia ny fahaizana manomana haingana ny zava-pisotro mafana rehetra.
Ny safidy amin'ny fanomanana rano mangatsiaka sy mangirana dia manome rano hatramin'ny 15 litatra isan'ora.
J-Class dispensers rano
J-Class dispensers rano dia miavaka amin'ny kalitao avo indrindra azo raisina noho ny fampiasana teknolojia maoderina, izay miantoka fiasa azo antoka sy fampiasana marobe ny fitaovana.
Ireo dispensera ireo dia ampiasaina fatratra amin'ny birao, bara, trano fisakafoananaary koa amin'ny trano tsy miankina. Izy ireo dia novokarina tamin'ny karazany roa:
- Variant TOP - fitaovana iray hametrahana ambony latabatra
- safidy IN - hapetraka eo ambanin'ny tampon'ny latabatra.
Manamboatra karazana rano efatra ilay masinina:
amin'ny hafanan'ny efitrano
mafana miaraka amin'ny maripana hatramin'ny 98 ° C
Ny dispenser J-Class dia manana tanjaka roa: rano voaomana 30 litatra isan'ora sy rano 45 litatra isan'ora.
Ny mpaninjara rano tsy misy varingarina ao Niagara Top dia fitaovana maharitra, mateza ary azo antoka manomana rano madio sy matsiro, mahafeno ny fenitra avo indrindra, izay azo ampiasaina amin'ny birao, toeram-piasana ary birao.
Ny Distributor Niagara Top dia hanampy anao hamaha ireo olana momba ny lozisialy mifandraika amin'ny fitaterana sy fitahirizana rano anaty tavoahangy ary fitahirizana tavoahangy plastika foana. Noho ity fitaovana matihanina ity dia azo atao ny manome rano madio sy salama ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa, raha tsy misy ny famoahana rano anaty tavoahangy tsy manelingelina.
Ity dispenser ity dia natao hampiasaina amin'ny toeram-bahoaka rehetra, hiantohana ny fandidiana tsy misy olana rehefa mizara rano mamirapiratra sy mbola be dia be, mamela anao hameno haingana ny karazana sambo rehetra ary hampihena ny vidin'ny famatsiana sy ny fitehirizana rano fisotro.
-IN - counter-counter
Ny dispenser rano tsy misy varingarina DRINK TOWER no fitaovana tonga lafatra amin'ny fanomanana rano mangatsiaka be sy mahasalama be, na mbola mangirana na mamirapiratra. Ity fitaovana ity dia mety tsara amin'ny sehatry ny fikarakarana sakafo, amin'ny trano fisotroana, trano fisakafoanana ary trano fandraisam-bahiny, izany hoe na aiza na aiza ilaina ny fanomanana rano fisotro madio tsara be dia be ao anatin'ny fotoana fohy.
Ity fitaovana ity dia azo ampifandraisina amin'ny rafitra eo ambanin'ny kaontera rehetra.
Ny mpizara DRINK TOWER dia vita amin'ny fitaovana avo lenta indrindra, miantoka fiasa maharitra sy tsy misy olana. Ny endriny dia ahafahana manangona rano fisotro voaomana amin'ny fahadiovana.
Ny dispenser rano H2O tsy misy varingarina dia fitaovana maoderina natao ho fanomanana rano fisotro mangatsiaka mafana sy mafana ary karbonina ary rano amin'ny hafanan'ny efitrano. Ny refy feno, ny famolavolana maoderina ary ny fiasan'ny intuitive no tombony an'ity fitaovana ity, misy amin'ny kinova roa:
- ambony latabatra - TOP
-nidina-counter miaraka amin'ny spout - IN.
9 lcensinder maimaimpoana ranofitaovana fanondrahana rano ao an-tranodispenser rano an-tranowater dispenserMpizara rano 5ldispenser-drano alaovidin'ny mpizara ranodispenser rano ho an'ny ankizydispenser ho an'ny rano manidinaWarsaw dispenser ranorano mafanawater dispenser5l water dispenserMpamaritra rano allegrotsy fahita anaty ranovidin'ny dispenser ranodispenser rano fanomezana voajanaharyvidin'ny dispenser fanomezana fanomezana natioradispenser rano ho an'ny ankizydispenser rano ho an'ny biraodispenser rano an-tranovidin'ny dispenser rano an-tranofisotro rano fisotroeden water dispenserboky torolàlana momba ny rano edendispenser rano misy karbonikavidin'ny dispenser rano mamirapiratradispenser rano misy karbonika ho an'ny tranowater dispenser ny fomba fiasananympizara rano Krakowdispenser rano mineralydispenser rano oasismpizara rano olxfisotro rano fisotrompizara rano amin'ny teny anglisympamatsy rano amin'ny tafio-drivotradispenser rano ao anaty vata fampangatsiahanadispenser rano ao anaty vata fampangatsiahana ny fiasan'ioWarsaw dispenser ranompamatsy rano wrocławrefin-dispenser ranotrano fandraisam-bahinyvidin'ny fanofa-bidy amin'ny ranoco2 water dispensertapitra dispenser ranodispenser rano miaraka amin'ny vata fampangatsiahanampizara rano avy amin'ny tambajotrany fandefasana ranompamatsy rano ho an'ny orinasampaninjara rano mineralympizara rano amin'ny loharanoRantsankazo irayRivotra fampangatsiahana ranopaompy rano dispenser tavoahangy 5 galona 18fitaovana fanasiana rano sy sivanafitaovana ho an'ny rano gassingfitaovana fanondrahana rano alokafitaovana gasification rano ceneo
Jereo vaovao hafa:
Mihena ny tsindry amin'ny rano
17 Aprily 2020
Ny rano malefaka
Ny electrolysis rano
7 Aprily 2020
Miova ny osmosis
6 Aprily 2020